Ogaden News Agency (ONA) – Kooxda TPLF oo Kufashilantay Damaceedii Dhul Balaadhsiga.
Kooxda TPLF oo Kufashilantay Damaceedii Dhul Balaadhsiga.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Gonder ee dhulka Axmaarada ayaa sheegaya in uu fashil kudhamaaday damacii dhul balaadhsiga ahaa ee kooxda TPLF ay kudoonaysay in ay kuxalaashato qaybo kamid ah dhulka qoomiyada Axmaarada.
Sida aan horaan idiinku soo tabinay kooxda damac xumida kucaan baxday ee TPLF ayaa olole xoogan ugu jirtay siday Gobolka Tigree ugu dari lahayd qayb kamid ah dhulka Axmaarada taas oo xiisad aad uxoogan ay kadhalatay.
Sida xogta aan kuhelay dadwaynaha kudhaqan 12 tuulo oo dhulka qoomiyada Tigreega uu damacu kaga jiray ah ayaa lawaydiiyay afti ku aadan cida ay udhasheen iyo cida ay doonayaan in ay raacaan ama lanoolaadaan, waxayna dadwaynuhu 100% ucodeeyeen in ay udhasheen qoomiyada Axmaarada isla markaana ay kamid ahaanayaan Gobolka Gonder ee dhulka Axmaarada.
Arintan ayaa waji gabax kunoqotay kooxdii damacu uu qaaday ee TPLF, waxayna saraakiishii arintan u ololaynayay kunoqotay nabar aysan kasoo kaban karin, sidoo kale go’aanka midaysan ee shacabka Axmaaradu ay isku raaceen ayaa noqonaya mid niyad jabiya qoomiyada Tigreega.
Taliska wayaanaha iyo waxgaradka qoomiyada Tigreega ayaa inbadan isku mashquuliyay sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen dhulka istaraatiijiga ah ee dhaca xuduuda Sudan iyo Itoobiya, halkaas oo qoomiyadu ay doonaysay in ay dabada lagalaan xuduuda dhinaca Sudan.
Kooxda macangaga ah ee TPLF ayaa umuuqata mid meelkasta laga nacay waxayna kooxdu kufashilantaa talaabo kasta oo ay qaadaan. Todobaadkii hore ayay ahayd markii dhalinta qoomiyada Tigreegu ay garoonka magaalada Maqale kudhawaaqeen wayaane hanadhaafo iyo erayo kale oo lamid ah.